Rudzi Rukuru uye Gedhi reSango Rinoenda kuAsia
Zvine zvitsuwa zve 7,000 uye huwandu hwevanhu vane mamiriyoni e104, Philippines ndiyo nyika huru uye nzira inopinda kuAsia. Vakawanda vePhilippines vanoshanda muChina, dzimwe nyika dzeAsia, uye kunyange kumativi ekumaodzanyemba, uko vane nzvimbo dzakasimba.
Basa Rakakosha Uye Nguva YeSvondo Yemazuva
Chechi yaShe yave iri muPhilippines kwemakore akawanda nekuda kwezvaiitwa uye zvekare zvekuita basa. Nhasi pane inofungidzirwa neChnumx ungano. VaPhilippines VaKristu vakagadzirira kuparidzira evhangeri yenyika yavo nekuwedzera imwe nguva yekukura kweChechi, asi vanoda zvigadziro zvekukunda mamwe matambudziko.
Machechi mazhinji muPhilippine ane evhangeri-nguva imwe chete kana kwete zvachose. Dhigiriji wezuva anokwanisa kupa mapoka ose emakereke uye makirasi ne-zvakadzidziswa kudzidzisa. Uyewo, nzvimbo zhinji muPhilippines dziri kure uye zvakaoma kusvika. Dhizha rezuva rakagadzirwa kwenguva yakadaro uye nzvimbo seyizvi.
Muna 2014 Sunset yakatanga mauto makuru-continentin ekushanda achishandiswa nemaoko anochengetwa nevhudhi-vatinzwi vateereri vemazwi kuti vasvike pasi neEvhangeri. Chiitiko cheSvondo chinoramba chichiparadzira Shoko kune dzimwe nyika. Solar Player ine maawa anopfuura 400 eBhaibheri uye Kudzidziswa Bhaibheri.
Chirongwa cheSolar Mission Philippines ndechekufukidza rudzi irworwo neShoko raMwari nekugovera 2,000 mutauro weChirungu mutambi wezuva muPhilippines pakuguma kwe2018. Vachagoverwa kuungano dzose dziri munyika, kumabasa akasiyana-siyana eushumiri, nekuvatungamiriri vechechi uye evhangeri avo vachadyara nekusimbisa machechi nekukura hama.
Imwe nyika yose yekuedza kuwana mari yaidiwa yakatanga January 24th uye ichapfuura muna December 31, 2018. Zviuru zveungano uye vanhu pachavo vachakumbirwa kutsigira izvi.
Kuburikidza nerupo rwemunhu asingazivikanwi mupi, zvipo ku Sunset International Bible Institute zvichafananidzwa nemari ye dollar. Zvipo zveSolar Mission zvinokodzera kuti zvigadzirwe.
Dana Sunset pa 800-658-9553 kuti uwane mamwe mashoko pamusoro peSolar Player yePhilippines kana kushanyira webasa ravo pa http://www.sibi.cc/solar.